I-Chateau Woods - I-Cliff Cottage With Valley View - I-Airbnb
I-Chateau Woods - I-Cliff Cottage With Valley View
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguMosab
Ukuzulazula ngaphezu kweekhilomitha eziyi-7 zezinto eziluhlaza kunye neChateau Woods zinikezela ngeendawo zokuhlala zobunewunewu kwindawo enembali kunye nazo zonke izinto ezinokusetyenziswa zale mihla kunye neendawo ezitofotofo.
Izindlu Ezisemaphandleni Zasemaphandleni zibekwe phezu kweenduli, kufutshane nendlu enevaranda, zijongene nentlambo yehlathi elisemaphandleni kwelinye icala lomhlaba. Le ndlu inebhedi enkulu, igumbi lokuhlamba kunye nomgangatho wabucala ojongene nentlambo ebukekayo yeentaba, imilambo, iingxangxasi kunye nehlathi elixineneyo.
Indlu enevaranda yale mihla ye-boutique ye-7000sq.ft igciniwe kumantla eenduli ezintle, ejikelezwe ziifama zeti. I-Chateau Woods ekwihlathi lemvula laseWestern Ghats kwelinye icala nakwintlambo enzulu kwelinye icala, iChateau Woods yenza kube lula kwaye kubekho ukuzola kwaye inikezela ngayo yonke into eyenza ixesha lakho libe lihle.
4.64 · Izimvo eziyi-39
Ebekwe ecaleni kweSoochipara Falls, singqongwe ziindawo zeti eziluhlaza kwelinye icala kunye nentlambo kwelinye icala.
Umbuki zindwendwe ngu- Mosab
Abasebenzi baza kuhlala befumaneka kwindawo ephambili